Actresses --> कथाले माग्छ किआफैँ दिन्छन् ?
Topic: Actresses --> कथाले माग्छ किआफैँ दिन्छन् ?
Author Topic: Actresses --> कथाले माग्छ किआफैँ दिन्छन् ? (Read 4295 times)
« on: June 17, 2015, 06:48:44 AM »
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा केही समय अगाडि सेक्सलाई प्राथमिकता दिएर चलचित्र बन्ने लहरै आएको थियो भन्दा फरक नपर्ला । यसो त सिनेमा क्षेत्र मा कतिपय नायिकाहरु जस्तो सुकै सिनदिन पनि तयार हुन्छन् । कथाले माग्यो भने जस्तोसुकै सिन दिन्छु भन्नेहरु पनि नभएका होइनन् । कुनै समय गौरी मल्ल, करिस्मा मान्नधर, रुपा राना जस्ता पुराना नायिकाहरुले पनि यस्ता सिनहरु दिएका थिए । तर त्यतिबेला उनीहरुले दिएका दृश्य का विषयमा आलोचना नभएको पनि होइन । नेपाली रजतपट मा प्रवेश गर्ने नयाँ अनुहारको पनि कमि छैन । नयाँ नायिकाहरु अहिले कथाले मागे जति बेड सिन र सेक्स सिन दिन पछि पर्दैनौ भन्ने गर्दछन ।
कथाले पनि कति हदसम्म माग्छ भन्ने कुनै सीमा नै हुन्न । चलचित्र चपली हाइट मा बिनिता बरालले, ए टि एममा जिया के सीले कथाले मागे जति नै त्यस्ता दृश्य दिएका होलान तर ए टि एमलाई उक्त दृश्य सेन्सरले काटेर एडल्ट बनायो फेरी निर्माण युनिटले काटेको सिन पनि जोडेर चलाउँदा अब कहिल्यै हलमा चलाउन नपाउने भयो । त्यस्तै उकेश दाहालको किन किन, यौन मनोविज्ञानमा आधारित भनिएको साँघुरो, नाइनओ क्लकमा यौन अपराधको कुरा, रक्षामा समाबेश बेड सिनको कारण नायिका तथा निर्देशकको विवाद, बाबु बलामीको युजलगायतका चलचित्रमा यस्ता कुरा बजारमा धेरै नै सुनिए ।
के साँच्चै कथाले नै मागेको हुन्छ वा नायिकाहरु नै आफ्नो पब्लिसिटीकालागि यस्ता सिन दिन तयार हुन्छन् ! यसै विषयमा केन्द्रित रहेर केही नायिकाहरुसँग लिइएको
नायिका रुपा राना भन्छिन– ‘अहिलेका नायिकाहरु अन्तर्वार्तामा समेत कथाले मागे जस्तोसुकै सिन दिन तयार हुने कुरा बताउँछन् । तर कथाले कहिल्यै पनि नायिकालाई नङ्गयाउँदैन । कथावस्तुअनुसार कथा सुहाउँदा सिनदिनु भनेको अलग कुरा हो । कहिलेकाहीँ कतिपय निर्माता÷निर्देशकले त्यस्ता कुराहरुलाई कथामा जबर्जस्ती घुसाएको पनि पाइएको छ । समाजले कतिसम्म पचाउँछ, त्यो आफूले डिसाइड गर्ने कुरा हो । कथाले माग्दैन ।’
त्यस्तै अर्की नायिका अशिष्मानकर्मी भन्छिन्–‘एक्पोज हुनकथाले माग्नु पर्दैन । पहिला नै कथा पढिसकेको हुन्छ र बुझेको पनि हुन्छ । त्यसैले कथाले माग्यो भनेर एक्पोज हुन्छु भन्नु गलत कुरा हो । मैले पनि अधकट्टी चलचित्रमा हल्का ग्ल्यामरस सिन दिएकी छु । तर त्यो कथा वस्तुअनुसार नै सुट भएको छ । निर्माता÷निर्देशकको दबाबमा एक्पोज भएँ भन्ने कतिपय नायिकाको कुरा आउँछ तर वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन । एक्पोज कतिगर्ने भन्ने आफूले डिसाइड गर्ने कुरा हो ।’
नायिका सारिका घिमिरे यसबारेमा यसो भन्छिन्– ‘कहिले पनि कथाले त्यस्तो सिनदिनु भन्दैन । त्यो आफ्नो इच्छाले दिने कुरा हो । कतिपय नायिकाहरुले आफ्नो रहरले पनि दिन्छन् । नयाँ लाईप्रायःनिर्माता÷निर्देशकले दबाब दिन्छन् भन्ने सुनेको छु । तर मेरो सन्दर्भमा त्यस्तो भएको छैन र मलाई नाङ्गिएर फिल्म खेल्नु पनि छैन । आफूमाक्षमता छ भने नाङ्गो हुनु जरुरी छैन .
roopa rana.jpg (25.69 kB, 480x720 - viewed 351 times.)
B6ZTHRpCYAA12Lf.jpg-large.jpg (131.11 kB, 1024x1024 - viewed 364 times.)